Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Canada ayaa ku dhawaaqday inay kordhisay xayiraadda duulimaadka ee Hindiya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Maaddaama Kanada ay isu diyaarineyso soo noqoshada duulimaadyada tooska ah ee Hindiya ee Kanada, Gaadiidka Kanada wuxuu ku dhawaaqayaa kordhinta Ogeysiiska Airmen (NOTAM) oo xaddidaya dhammaan duulimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa khaaska ah ee Kanada ka imanaya Hindiya illaa Sebtember 26, 2021, markay tahay 23: 59 EDT.
Iyada oo Kanada isu diyaarinayso soo noqoshada duulimaadyada tooska ah ee Hindiya ee Kanada, Gaadiidka Kanada ayaa ku dhawaaqaya kordhinta Ogeysiiska Airmen (NOTAM) ee xaddidaya duullimaadyada Kanada ka imanaya Hindiya.
Qof kasta oo Kanada jooga waxaa lagula talinayaa inuu ka fogaado safarka aan muhiimka ahayn ee ka baxsan Kanada-socdaalka caalamiga ahi wuxuu kordhiyaa halista soo-gaadhista, iyo faafitaanka COVID-19, oo ay ku jirto caabuq ay sababeen noocyo kala duwan.
Tallaabooyinka caafimaadka ee xuduudaha iyo caafimaadka dadweynaha ayaa iyagana la beddeli karaa iyadoo xaaladda cudurrada faafa ay sii kordhayaan.
Kanada waxay sii wadaa inay qaaddo hab ku saleysan qatar iyo cabbir si dib loogu furo xadka iyadoo mudnaanta la siinayo caafimaadka iyo badbaadada qof walba oo Kanada jooga.
Iyadoo Kanada ay isu diyaarineyso soo noqoshada duulimaadyada tooska ah ee Hindiya ilaa Kanada, Gaadiidka Kanada wuxuu ku dhawaaqayaa kordhinta Ogeysiiska Airmen (NOTAM) kaas oo xaddidaya dhammaan duulimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa khaaska ah ee Kanada ka imanaya Hindiya illaa Sebtember 26, 2021, 23:59 EDT.
Marka xaddidaadda duullimaadyada tooska ahi dhammaato, dadka safarka ah ee u qalma inay galaan Kanada waxay awoodi doonaan inay raacaan duullimaadyo toos ah oo Hindiya ah Canada oo leh tallaabooyinka dheeraadka ah ee soo socda:
Dadka socotada ah waa inay haystaan ​​caddeyn tijaabo maadi ah oo COVID-19 ah oo ka timid oggolaanshaha Sheybaarka Genestrings gegida dayuuradaha ee Delhi ayaa lagu qaatay 18 saacadood gudahood markii la qorsheeyay inay ka duulaan duulimaadkooda tooska ah ee Kanada.
Kahor intaan la fuulin, hawl -wadeennada hawadu waxay hubin doonaan natiijooyinka imtixaanka socotada iyagoo hubinaya inay u -qalmaan inay yimaadaan Kanada, iyo in socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay ay xogtooda geliyeen barnaamijka moobilka ee ArriveCAN ama mareegaha. Socotada aan awoodin inay buuxiyaan shuruudahan waa loo diidi doonaa inay raacaan.
Tallaabada ugu horreysa, Sebtember 22, 2021, saddex duulimaad oo toos ah oo ka yimaada Hindiya ayaa imaan doona Kanada dhammaan rakaabyada duullimaadyadanna waxaa laga baari doonaa COVID-19 markay yimaadaan si loo hubiyo in tallaabooyinka cusubi shaqeynayaan.
Ka dib markii dib loo bilaabay duulimaadyadii tooska ahaa, socotada xaqa u leh inay galaan Kanada ee u ambabaxa Hindiya Canada iyada oo loo marayo waddo aan toos ahayn ayaa loo baahnaan doonaa in la helo, 72 saacadood gudahood ka-bixitaanka, tijaabo maadi ah oo COVID-19 ah oo ka timid waddan saddexaad-oo aan ahayn Hindiya-ka hor intaanay sii wadin safarkooda Kanada.
Qof kasta oo Kanada jooga waxaa lagula talinayaa inuu ka fogaado safarka aan muhiimka ahayn ee ka baxsan Kanada-socdaalka caalamiga ahi wuxuu kordhiyaa halista soo-gaadhista, iyo faafitaanka COVID-19, oo ay ku jirto caabuq ay sababeen noocyo kala duwan. Tallaabooyinka caafimaadka ee xuduudaha iyo caafimaadka dadweynaha ayaa iyagana la beddeli karaa iyadoo xaaladda cudurrada faafa ay sii kordhayaan.